‘सूर्यविनायक नगरपालिकालाई जनमुखी र सेवामुखी बनाइनेछ’ |
प्रकाशित मिति :2017-05-08 13:28:36
समृृद्ध र सबल नेपाल निर्माणका लागि स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को विजय आवश्यक छ । यही लक्ष्यका एमाले उम्मेदवारहरू अहिले पार्टी केन्द्रले तयार गरेको घोषणा पत्रका साथै स्थानीय जनताका समस्या लगायतका विषय समेटेर आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रका साथ आममतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । यसै क्रममा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको १० वटै वडामा निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई एमालेले तीव्र बनाएको छ । एमालेको नीति, कार्यक्रम र मतदाताको चाहनाको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार वासुदेव थापासँग गरिएको कुराकानी :
– सूर्यविनायक नगरपालिकामा निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
यस नगरपालिकाका दशवटै वडामा घरदैलो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको ठूलो संख्यालाई स्वागत गरी उचित जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । युवा, महिला, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, समाजका अगुवाको बीचमा अलगअलग कार्यक्रम बनाई भेटघाट तथा अन्तत्र्रिmया गरिएको छ । भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका र मातहतका १० वटै वडामा एमालेको आगामी नीति, कार्यक्रम र लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमार्फत मतदातासामु स्वयं उम्मेदवारमार्फत घरघरमा पु¥याइएको छ । नगर तथा सबै वडामा कार्यालय व्यवस्थित गरिएको छ । ¥याली, सभा र झन्डोत्तोलन गरिएको छ । हजारौं कार्यकर्ता निर्वाचन प्रचारका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् ।
– तपार्इंले मतदाताको अपेक्षा कस्तो पाउनुभयो ?
मतदाता एमालेप्रति बढी आशावादी छन् । एमाले जिम्मेवार पार्टी भएको हैसियतले राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । भक्तपुरमा विकास निर्माणमा पार्टीका तर्फबाट भएका गतिविधिले सूर्यविनायक नगरपालिकामा एमालेको नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि मतदाता धेरै उत्साहित भएको मैले पाएको छु । सूर्यविनायक नगरपालिमा ग्रामीण भेग धेरै भएकाले सबै वडामा सडक, खानेपानी, विशेषतः भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास नै मतदाताको चाहना रहेका पाइयो । म नगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएपछि मतदाताका अपेक्षा, चाहना पूरा गर्ने वचन मैले मतदातालाई दिने गरेको छु ।
– तपार्इं सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभयो भने सूर्यविनायक नगरपालिकालाई कस्तो सहर बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
नेकपा (एमाले) ले भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमध्ये सूर्यविनायक नगरपालिकामा मैले निर्वाचन जितेपछि जनमुखी र सेवामुखी प्रशासन सञ्चालन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनेछु । महिला हिंसामुक्त नगरपालिका बनाइनेछ, जनताको आम्दानीको स्रोत विस्तार गरिनेछ ।
मेलम्ची खानेपानीको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन दबाब सिर्जना गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानीले नसमेटेको नगरका बाँकी वडामा वैकल्पिक खानेपानी योजना सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा लागू गरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शिशु तथा गरिबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ । आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाइनेछ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र बनाइनेछ । नगरपालिकामा सञ्चालन हुने वातावरणमैत्री उद्योगलाई कर छुट गरी विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्सान गरिनेछ । टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी भन्ने नाराका साथ युवालाई बेरोजगार हुन दिइनेछैन । प्राविधिक तथा सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न नगरभित्रका स्कुल तथा कलेजमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउनका लागि विद्यालय, वडा कार्यालय तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई सेवा प्रदान गरिनेछ ।
उज्यालो नगरको नारा प्रदान गर्दै टोल टोल, मठ मन्दिर तथा सार्वजनिक स्थलमा, विद्यालयमा सोलारको सुविधा प्रदान गरिनेछ । व्यवस्थित आवास नीति लागू गरी भूकम्पप्रतिरोधी, ऊर्जामैत्री तथा वातावरणमैत्री करेसा तथा कौशी बारी, आकाशे पानी संकलन प्रविधि, सोलार ऊर्जाको प्रयोग गरी बनाइने घरहरूलाई नगरपालिकाबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रोत्सान गरिनेछ । महिलालाई सबै क्षेत्रमा समान अवसर प्रदान गरिनेछ । मठ, मन्दिर, घाट, किरियापुत्री भवन, सामुदायिक भवन निर्माण गर्न सहयोग गरिनेछ । सडक सञ्चालन व्यवस्थित गरिनेछ । ढल, नहरको व्यवस्था गरिनेछ । बालश्रम मुक्त नगरपालिका निर्माण गरिनेछ । निरक्षतरता उन्मूलन गरिनेछ, एक घर एक स्नातकोत्तर भन्ने नाराका साथ गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गरिनेछ । दलित, जनजाति, गरिब, पछाडि परेका समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
वातावरणमैत्री सफा नगरपालिका निर्माण गरिनेछ, घरघरबाट पैदा हुने फोहोरलाई व्यवस्थित गरिने छ । भ्रष्टाचारमुक्त नगरपालिका बनाइनेछ, । राष्ट्रिय प्राणी उद्यानलाई तीव्र गतिमा निर्माण गरिनेछ । नगरपालिकाका अधिकांश वडालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिनेछ । नगरपालिका भित्र रहेका धार्मिक तीर्थस्थल आसपासमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ । तत्कालीन जिविसले निर्माण गर्न लागेको भक्तपुर चक्रपथ, यस नगरपालिकामा १ देखि १० वडाका मध्यभागबाट जाने गरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ । केन्द्रबाट आउने अनुदानमा मात्र भर नपरी नगरभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरी जनतालाई कर तिर्न प्रोत्सान गर्ने र अन्य विविध क्षेत्रको आम्दानी बढाई नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर स्वाधीन आयस्रोत भएको नगरपालिका बनाइनेछ ।
४.तपाईंले निर्वाचन जित्ने आधार के–के हुन् ?
नेकपा एमालेका कटिबद्ध कार्यकर्ता, चुस्तदुरुस्त संगठन, एमालेले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एमालेको भूमिका, राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेका स्पष्ट अडान, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि, ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट दोब्बर वृद्धि गर्ने कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्नेलगायतका कामका आधारमा आममतदाताले एमालेलाई मत दिने विश्वास छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सार्वजनिक गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने अभियानका कारण अहिले देशभरका गाउँको मुहार फेरिएकाले पनि एमालेले निर्वाचन जित्ने छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले र पार्टी अध्यक्ष ओलीले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका, राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, हिमाल र पहाडसँग तराई छुट्ट्याउने कुराको विरोधजस्ता विषयमा लिनुभएको अडान, भारतले लगाएको नाकाबन्दी खोल्न र भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा चीनसँग गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि, समृृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पनाले सूर्यविनायक नगरपालिकामा एमालेलाई विजयनजिक पु¥याइसकेको छ ।
पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत मन्त्री भएका बेलामा हाम्रै पहलमा हनुमन्ते कोरिडोरमा ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सूर्यविनायक क्षेत्रको २५ सय रोपनी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राणी उद्यान केन्द्र बन्ने भएको छ, यस नगरको वडा नम्बर १ देखि ६ सम्म (कटुन्जे, गुन्डु, दधिकोट, सिरुटार, बालकोट) मा आधुनिक स्याटलाइट सिटी निर्माण गरिनेछ । डोलेश्वर अनन्त लिंगेश्वर, दक्षिण बाराही, चरखण्डीजस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थानमा करोडांै बजेट विनियोजन गरी पुनर्निर्माण गरिएको छ । यस नगरभित्रका ३५ वटा सडक विस्तार गर्नका लागि ३८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी काम सम्पन्न भएको छ ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्को समयमा एमालेको पहलमा प्रतिमृतकका आफन्तलाई सान्त्वनास्वरूप ७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो । त्रिपाल, खाद्य सामग्री, औषधी सबै पीडितसमक्ष पुग्ने गरी वितरण गरियो । २१ सयभन्दा बढी अस्थायी टहरा निर्माण गरियो । हजार बन्डलभन्दा बढी जस्तापाता, खानेपानी ट्यांकी वितरण गर्नुका साथ अस्थायी शौचालय निर्माण गरियो । यो नै एमालेले निर्वाचन जित्ने आधार हो ।
महाभूकम्पको पीडामा रहेका जनता संसदीय चुनावमा निर्वाचित भएका सभासद् रामेश्वर ढुंगेल र नेमकिपाका प्रतिनिधिहरू बेपत्ताजस्तै भएर जनताको मतको अपमान गरेका कारण उनीहरूका कैयौं समर्थक, शुभेच्छुक एमाले प्रवेश गरेका छन् र अहिले एमालेले उहाँहरूलाई उचित जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले मैले निर्वाचन जित्ने अर्को आधार बनेको छ ।
– नगरपालिकाभित्र तपार्इंका प्रतिस्पर्धीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
निर्वाचनमा भाग लिने पार्टी सबै प्रतिस्पर्धी हुन् । तर पनि विगतमा संसदीय निर्वाचन जितेका कारण अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुन सक्छ । तर निर्वाचित सांसद र नेपाली कांग्रेस पार्टीको आफ्नो क्षेत्रप्रतिको बेवास्ताले मतदातामा कांग्रेसप्रति वितृष्णा देखिएको छ । त्यसैले पनि ठूलो अन्तरका साथ एमाले विजय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।